Web Design & Development - Bits Century
စျေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်ရန် နှင့် လုပ်ငန်းပုံရိပ် မြင့်မားစေရန် အကောင်းဆုံး Website များ
Website သည် ယနေ့ digital age ထဲမှာ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခု တွင် အရေးပါသော အပိုင်းတစ်ခု အဖြစ်ပါဝင်နေလျက်ရှိပါသည်။ မိမိလုပ်ငန်းအတွက် ကောင်းမွန်သော website တစ်ခုရှိနေခြင်းဟာ အပြိုင်အဆိုင်လုပ်ငန်း များထက် အားသက်ချက်တခု အဖြစ်ဖော်ဆောင် နေပြီး မိမိ လုပ်ငန်း ပုံရိပ်ကိုလဲ မြင့်တက်စေပါသည်။
Bits Century သည် လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းများအတွက် လျင်မြန်ပေါ့ပါး၍ Device မျိုးစုံ နှင့် Browser အားလုံးတွင် ကိုက်ညီမှုရှိပြီး ၊ ခေတ်မှီလှပသော ဒီဇိုင်းများ နှင့် ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်နိုင်သော Company Portfolio Website များ ၊ Education Website များ နှင့် Ecommerce Website များကိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
မိမိလုပ်ငန်းဟာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသား ( www.yourcompany.com ) အထောက်အထားတို့ကြောင့် customers များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုပါ ရရှိ‌စေသည်။မိမိလုပ်ငန်း၏ ထုတ်ကုန် / ဝန်ဆောင်မှု အသစ်များကို website မှတဆင့်ရောင်းချခြင်းဖြင့် ဈေးကွက်ပါချဲ့ထွင်ပီးသားဖြစ်ပါတယ်။
Customers များက လူကြီမင်းတို့ကို website မှတဆင့် ထုတ်ကုန်/ဝန်ဆောင်မှုးများနှင့်ပက်သက်ပြီး အချိန်မရွေးဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တာကြောင့် Two-way communication လဲဖြစ်ပါတယ် ။
Bits Century မှရေးဆွဲသော Website များတွင် ကြိုတင် Quotation တွက်ချက်နိုင်ခြင်း ၊ Invoices ထုတ်ယူခြင်းနှင့် Enquiry Form များကိုထည့်သွင်းပေးပါသည်။
Bits Century မှ Website အားလုံးတွင်
အောက်ပါ အချက်အလက်များ အခမဲ့ ပါဝင်သည်။
အကန့်အသတ်မရှိ ဝဘ်မေးလ် အရေအတွက်
Premium ပုံများ အသုံးပြုခြင်း
လုပ်ငန်းတည်နေရာပြ Google Map
Contact & Enquiry Form ပါဝင်ခြင်း
ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းနိုင်သော Unlimited Pages
Device အားလုံးတွင် ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း - Responsive
Browser အားလုံးတွင် ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း
Website QC ဖြင့်စစ်ဆေးပေးခြင်း
Basic SEO - Google တွင် လုပ်ငန်းနာမည် နှင့် ရှာဖွေနိုင်ခြင်း
Daily Analytics ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
Social Plugins များနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း
သင်တင့်လျောက်ပတ်သော နှစ်စဉ်ကြေးနှင့် ကုန်ကျစရိတ် အသက်သာဆုံး နှုန်းထားများ
3 GB5GB 8 GB 10 GB 15 GB
စာမျက်နှာအရေအတွက်5၁၅ ၃၀ ၆၀ အကန့်အသတ်မရှိ
ပြသပေးမည့် ဒီဇိုင်းအရေအတွက် ၂ ခု ၂ ခု ၃ ခု ၅ ခု ၁၀ ခု
အခမဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း တစ်လ ၁ကြိမ် တစ်လ ၂ကြိမ် တစ်လ ၃ကြိမ် တစ်လ ၄ ကြိမ်
App ( Android + IOS ) - Web Base
ဝယ်ယူမည် ဝယ်ယူမည် ဝယ်ယူမည် ဝယ်ယူမည် ဝယ်ယူမည်
ဝယ်ယူမည် ဝယ်ယူမည် ဝယ်ယူမည် ဝယ်ယူမည်
Domain နှင့် Hosting ဝယ်ယူပြီးသားဆို ပြုလုပ်လို့ရပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်။ Bits Century မှ ဝယ်ယူထားသော Package ၏ကျသင့်ငွေမှ Domain သို့မဟုတ် Hosting ၏တန်ဖိုးကို ပြန်လည်နှုတ်ယူပေးမည်ဖြစ်ပြီး Website ပြုလုပ်ခြင်းအတွက်သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Setup ပြုလုပ်ပြီးသားဖြစ်လျှင် Admin နှင့် Admin Account & FTP & Cpanel အား Bits Century သို့ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်း စတင်အပ်နှံပြီး ၁ပတ်အတွင်း Design အားကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Develop ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ၂ပတ် ခန့်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း အချိန် ၂ပတ်မှ ၄ပတ် – ၁လ ထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။
Website ပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ ?
လူကြီးမင်းလုပ်ငန်းရဲ့ Logo နှင့် Company Portfolio လိုအပ်ပြီး ၊ Website အတွင်းအသုံးပြုချင်သော ပုံများ ၊ စာသားများရှိပါက ပေးပို့ရပါမည်။ လူကြီးမင်းလုပ်ငန်းရဲ့ နေရပ်လိပ်စာ နှင့် ဆက်သွယ်ရန် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Security ပိုင်းနှင့်ပက်သက် စိတ်ချလို့ရပါသလား။
Bits Century မှ Website များအားလုံးသည်2Step Verification လုံခြုံရေးများ ၊ Admin Access logs များ ၊ Bruteforce Attack များနှင့် IP Address Ban ခြင်းများကို Auto ပြုလုပ်ထားပါသည်။ Daily Backup ထားရှိပြီး သတ်မှတ်ထားသော IP များကိုသာ Admin Dashboard သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
Webmail တွေဘယ်အချိန်စတင် အသုံးပြုလို့ရပါသလဲ။
လူကြီးမင်း အလုပ်စတင် အပ်နှံပြီး အချိန် ၁နာရီမှ ၂ရက် အတွင်း Webmail များကို စတင်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင် အကန့်အသတ်မရှိ ထပ်မံဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
Web Space ဆိုတာဘာလဲ ၊ ထပ်မံတိုးလို့ရပါသလား။
Web Space ဆိုတာ လူကြီးမင်း Website အတွင်းရှိပုံများ ၊ စာများ ၊ Files များ ၊ Webmail များ အားလုံးကိုဆိုလိုပါသည်။Website ၏ File သည် အများအားဖြင့် 1Gb မှ2Gb ထိအများဆုံးဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်းအသုံးပြုသော Webmail အလိုက် Storage ကိုထပ်တိုးနိုင်ပါသည်။
Website ၏ Post များပါဝင်ခြင်းမရှိပဲ Web Page အထဲတွင် လိုအပ်သော ဒီဇိုင်းနှင့် Layouts များကို Bits Century မှ ကိုယ်ပိုင် ဒီဇိုင်းဆွဲပေးပြီး content များ ကိုထည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ စာမျက်နှာ၏ အရှည် သည် A4 တစ်ရွက်ခွဲထိ ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ – About Us, Contact Us
Bits Century မှ Website အားလုံးတွင် Bronze မှတပါး ကျန်သော Packages အားလုံးတွင် ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်နိုင်သော Content Management System ပါရှိပြီး လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင် Website အတွင်းရှိစာများ ၊ ပုံများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အသစ်ထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းဝယ်ယူသော Package အလိုက် Bits Century မှ လုပ်ငန်းနှင့်ကိုက်ညီသော Design များကို ၁ပတ်အတွင်း ပေးပို့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်နိုင်ခြင်း ပါဝင်သော Packages များတွင် Website အတွင်းရှိ ပုံများ ၊ စာများကို ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်နိိုင်ပြီး ၊ အသစ် ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်နိုင်ရန်အတွက် Video , Articles များဖြင့်ပံပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အခမဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းသည် တစ်ကြိမ်လျှင် တစ်နာရီ နှုန်းဖြစ်ပြီး ကျော်လွန်သွားပါက တစ်နာရီလျှင် ၁၅၀၀၀ ကျပ်ထပ်မံကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Package ပြောင်းလဲလို့ရပါသလား ?
လူကြီးမင်း၏ လုပ်ငန်းချက်ပေါ် မူတည်ပြီး Package ပြောင်းလဲခြင်းအား ၆ လအတွင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ပြောင်းလဲသော Package ကျသင့်ငွေမှ ဝယ်ယူထားသော Package ကျသင့်ငွေ အားပြန်လည်နှုတ်ယူပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းအလုပ်စတင်အပ်နှံသည့် အချိန်တွင် Domain နှင့် Hosting များကိုစတင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး Webmail များကိုပါ အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စတင်အပ်နှံသည့် ရက်အား မှတ်သားထားမည်ဖြစ်ပြီး နောက်နှစ် ၁ ပတ်အကြိုတွင် နှစ်စဉ်ကြေးပေးဆောင်ရန် ကြိုတင် အကြောင်းကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
Application သည် Web Base ဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်း၏ phone ပေါ်တွင် android + ios ဖြင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး Website အတွင်း Download ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Google Playstore & App store များပေါ်သို့ တင်ပြီး ရယူလိုပါက ကျသင့်ငွေထပ်မံပေးချေရမည်။